Kuqubuke imvunge kubantu ngomfundisi we"Savanna" - Ilanga News
Home Izindaba Kuqubuke imvunge kubantu ngomfundisi we”Savanna”
Kuqubuke imvunge kubantu ngomfundisi we”Savanna”
Uthe lesi siphuzo singesinye sezithako esisebenza kwabasuke bezosuswa isinyama
UBUNGAFUNGA ukuthi kusejoyintini ngesikhathi abazalwane beHealing Wounds Church, eseDurban Station, eMngeni, eThekwini bethandazelelwa amaSavanna abebezoyogezwa ngawo empophomeni ngoLwesihlanu ebusuku.
INYUSE izinhlonze kubantu ezinkundleni zokuxhumana inkonzo “yeSavanna” ebiyenziwe ngumfundisi webandla labasindisiwe, iHealing Wounds Church, eliseDurban Station, eMngeni, eThekwini, owaphumela obala wathi esindisiwe enjalo, kodwa uyazenza izinto zabadala.
Le nkonzo obekuthiwa ngeyokuhlambulula abalandelwa ngamashwa, ibingoLwesihlanu lapho abazalwane betheleke nezibhuklabhukla zolamthuthu namabhodlela otshwala (iSavanna), okuvele ukuthi umfundisi wabo, uMfu Mzinto Ngema uthe “ubonisiwe” ngalesi siphuzo.
Ibiyelama isimemezelo sayo ebesikuFacebook, okuyilapho abantu abaningi bebezwakalisa ukwethuka njengoba besikucacisa ukuthi ofisa ukuba yingxenye yenkonzo kumele lingasali leli bhodlela lotshwala nenkukhu emhlophe.
ILANGA lake labika ngoMfu Ngema owaveza ukuthi yize esindisiwe, futhi engumfundisi ngokugcwele, kodwa uphinde abe nobunyanga njengoba nasebandleni lakhe kungafihlwa ukuthi kubuye kushiswe impepho, kukhanyiswe amakhandlela kukhulunywe namathongo.
Waze waveza nokuthi ngisho nokwelapha ngokwesintu, uyakwenza futhi akahlonizi ngakho njengoba nabazalwane bakhe bekwazi kahle lokho.
Ethintwa yiLANGA uMfu Ngema, uvele woma yinsini, wathi abantu abakholelwa kubantu abangasekho bayazi ukuthi utshwala bungenye yezinto ezibajabulisayo (abangasekho).
“Noma kunohlobo luni lomcimbi lapho kusuke kuhlangene khona abantu beyojabula noma beyophuza, kakukwazi ukuthi angabikhona ophuza iSavanna.
“Kanjalo nakulabo abangaphuzi, umcimbi usuke ungaphelele uma izongaphuzwa noma izongabikhona iCoke futhi yiyona ephela kuqala. Kanjalo-ke neSavanna yisiphuzo esithandwa kakhulu,” kusho yena.
Uthi ngokwesiboniso sakhe, iSavanna lena isebenza esiwashweni sokugeza athi sihlambulula sisuse amathunzi amnyama.
“Lesi siwasho ngisihlanganisa nenyongo yenkukhu, yingakho kumele uphathe nayo uma uzogezwa bese ngifaka nalesi siphuzo-ke.
“Ukuthi ngithe abantu mabaphathe lesi siphuzo, kakusho ukuthi bazosiphuza kepha singesinye sezithako engikhonjiswe zona ukuthi zingalekelela,” kusho yena.
Previous articleKusolwa amambawu “kofake itekisi emfuleni”
Next article‘Kuxabene ubendle oKhozini FM’